खेलकुदका लागी ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन – Bihani Online
१५ जेष्ठ २०७६ १८:५७ May 29, 2019 bihani
संघिय सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागी ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १ अर्ब ९५ करोड बढि हो ।यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा युवा तथा खेलकुदमा २ अरब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा तथा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्याकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेशस्तरको रंगशाला, खेलग्रामको निर्माण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको मुलपानी क्रिकेट मैदान सम्पन्न गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन् । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, सरकारले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । क्रिकेट एकेडमी निर्माणदेखि निजी क्षेत्रलाई खेलकुदमा आबद्ध गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।